Amanoveli ezincwadi: ama-biographies, ama-autobiographies nemidwebo yempilo | Bezzia
Izindaba zokubhala: ama-biographies, ama-autobiographies nemidwebo yempilo
UMaria vazquez | 29/04/2021 12:00 | Izindaba, Cultura
Ama-biographies, ama-autobiographies nezikhumbuzo zisisa emifanekisweni yomndeni engaphelele ngaso sonke isikhathi, ukugula kwabantu nokuhlushwa, amasiko endawo namasiko asendulo ezwe ... Ngakho-ke, sithola abaphikisi abahlukahlukene kakhulu ebesicabanga ukuthi siyabazi futhi esingabazi.
Sihambile izinhlu ezivela kubashicileli abehlukene sifuna izinto ezintsha zemibhalo ezilingana nalesi sigaba futhi sithole okuningi kakhulu kunalokho ebesingakuphakamisa. Akuzona zonke izinto eziyikho kepha uma ngabe zimelwe, noma sizamile, imizwa ehlukene nezindikimba.
1 Angikayitsheli ingadi yami okwamanje
2 Umama Ireland
3 Ubaba nomnyuziyamu wakhe
4 USvetlana Geier, impilo ephakathi kwezilimi
Angikayitsheli ingadi yami okwamanje
Insimu enhle eTuscany: uthando, ukufunda, indawo yokumelana. Futhi iphupho, umlobi uPia Pera akwazi ukufeza ukubonga epulazini elalishiyiwe: walungisa ikhabini waliguqula laba yindlu egcwele izincwadi, imidwebo nefenisha; nokho, akazange angenelele engadini yezithelo eyayiyizungezile, igcwele amakhambi asendle ayehamba lapho ngenxa yomoya nezinyoni. Amakhulu ezinhlobonhlobo zezimbali, izihlahla nemifino ayinikeze ukubukeka kwehlathi oku-odolwe yimizila embalwa.
Ngelinye ilanga, umbhali uthola lokho isifo esingalapheki simsusa kancane kancane. Ebhekene nokuwohloka komzimba wakhe, okuvinjelwa kancane kancane ukunganyakazi kwesitshalo, ingadi, leyo ndawo lapho impilo imila khona nalapho "uvuko" lwenzeka khona, kuba yisiphephelo sakhe. Njengoba ucabanga ngakho, wakha isibopho esisha nemvelo bese unikeza ukucabanga okucabangayo nokuthinta injongo yempilo. Umbhali uyazilalela futhi azilalele, futhi utshele ukuthi kwenzekani ngesikhathi evakashele esibhedlela, imicabango emhlasela ebusuku, izindima ezihamba naye nezimduduzayo ... Ephoqelelwa ukugula kwakhe ukumelana nokuqhubekayo, akenzi yeka ukuzwa ilukuluku nobumnene ngakho konke okumzungezile nokuhlale kukuhlobisa ukuba khona kwakhe: hhayi izimbali nezinyoni ezihlala engadini yakhe kuphela, kodwa futhi nenkampani yezinja zakhe, abangane bakhe, izincwadi, i-gastronomy ... «Manje konke ubuhle obumsulwa nobulula », busivezela.
I-Ireland ibilokhu ingowesifazane, isibeletho, umhume, inkomo, uRosaleen, ingulube, intombi, isifebe ...
Umbhali owine umklomelo we-Country Girls ubeka umlando wakhe wobuntwana - ubuntwana bakhe e-County Clare, izinsuku zakhe esikoleni samanazaretha, ukuqabula kwakhe okokuqala, noma ukubalekela kwakhe eNgilandi - kanye ne-Ireland, izwe lezinganekwane, izinkondlo, izinkolelo-ze, lasendulo amasiko, ukuhlakanipha okuthandwayo nobuhle obedlulele. I-Mother Ireland, ngokusho kweThe Guardian, “ngu-Edna O'Brien ngokusemandleni akhe. I-akhawunti evusa inkanuko nenhle yemvelo yemvelo nakulabo abahlala kuyo, abagcwele ukuqina nobuchule.
Ubaba nomnyuziyamu wakhe
UMarina Tsvetaeva wabhala le akhawunti yomlando womuntu ngesikhathi sokudingiswa eFrance wayishicilela ngesiRashiya, ngo-1933, komagazini abehlukene eParis; eminyakeni emithathu kamuva, ngo-1936, ezama ukusondela kubafundi baseFrance, waphinde wasebenzisa izinkumbulo zakhe zobuntwana ngesiFulentshi, iqoqo lezahluko ezinhlanu aziqamba ngokuthi Ubaba wami nomnyuziyamu wakhe futhi nokho ezingakaze zishicilelwe esikhathini sokuphila kwakhe. Kuzo zombili izinguqulo eziqoqwe kule volumu umbhali unikela nge ukukhishwa okungokomzwelo nokulalelwayo kwesibalo sikayise, u-Ivan Tsvetaev, uprofesa waseyunivesithi owanikela ngempilo yakhe ekusungulweni kweMoscow Museum of Fine Arts, iPushkin Museum yamanje. Imvamisa laconic nokuqhekeka kodwa ngamandla amakhulu enkondlo, lo mbhalo omuhle, onamandla futhi ohambayo, usisondeza ekusondeleni kwembongi engenakuqhathaniswa njengabanye abambalwa.
USvetlana Geier, impilo ephakathi kwezilimi
Uma impilo ifanelwe iziqu "zothando" yilezo zomhumushi uSvetlana Geier. Wazalelwa eKiev ngo-1923, wachitha ubuntwana bakhe phakathi kwezifundiswa ezivelele ezweni lakhe. Ukuhlanjululwa kukaSteninisti kwaqeda impilo kayise futhi, kwathi ngesikhathi sekuthathwe amaJalimane, wabona ubuqaba bamaNazi kunguqulo yayo eyayinegazi kakhulu. Ngenxa yobuhlakani bakhe nokushayela okubalulekile okungavamile, uGeier wayezoba, eminyakeni eyalandela, abe ngumhumushi okhaliphe kunabo bonke bezincwadi zaseRussia olimini lwesiJalimane lwekhulu lama-XNUMX. Ukuhumusha okusha kwamanoveli amahlanu amahle kaDostoevsky kwakungumsebenzi we-titanic ayethweswe wona umqhele impilo yokusebenza ekuhumusheni nasezincwadini. I-biography enhle kakhulu efaka izingxoxo eziningana umhleli nomhumushi uTaja Gut abazenza noSvetlana Geier phakathi kuka-1986 no-2007.
I-Yoga ukulandisa kumuntu wokuqala futhi ngaphandle kokucasha kwe ukucindezeleka okujulile ngokuthambekela kokuzibulala okuholele ekutheni umbhali alaliswe esibhedlela, atholakale ene-bipolar disorder elashwa izinyanga ezine. Futhi iyincwadi ekhuluma ngenkinga yobudlelwano, mayelana nokuwohloka kwemizwa nemiphumela yako. Futhi mayelana nobuphekula bamaSulumane nedrama yababaleki. Futhi, ngandlela thile futhi nge-yoga, umbhali abekwenza iminyaka engamashumi amabili.
Umfundi uphethe ezandleni zakhe umbhalo ka-Emmanuel Carrère ku-Emmanuel Carrère obhalwe ngendlela ka-Emmanuel Carrère. Okungukuthi, ngaphandle kwemithetho, ukugxumela esikhaleni ngaphandle kwenetha. Kudala umbhali wanquma ukushiya ngemuva izinganekwane kanye ne-corset yezinhlobo. Futhi kulo msebenzi okhazimulayo futhi ngasikhathi sinye odabukisayo, i-autobiography, ama-eseyi nemibhalo yezintatheli iyanqamuka. UCarrère ukhuluma ngaye futhi uya kwelinye igxathu ekuhloleni kwakhe imikhawulo yemibhalo.
Yimuphi kulezi zindaba ozozifunda kuqala? Usufundile okunye okwamanje? Ngicacile ukuthi ngizoqala ngokuthi "Angikayitsheli ingadi yami okwamanje", kepha angazi ukuthi iyiphi eminye imidwebo engizoyilandela.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Izindaba » Izindaba zokubhala: ama-biographies, ama-autobiographies nemidwebo yempilo
Hlela ikhaya lakho ngendlela engu-20/10, wazi ukuthi iqukethe ini